Madaxweyne Xasan oo Muqdisho ku qaabilay guddiga difaaca baarlamanka Uganda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Maddaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay guddiga difaaca iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka Ugandha. wafdigan waxaa la socday saraakiisha AMISOM.
Madaxweynaha oo uga mahadceliyey xildhibaanada Ugandha booqashadooda Muqdisho ayaa yiri “Ugandha waa waddan aan aaminsanahay inay yihiin wallaalo dhiigooda noo huray, mana ilaaweyno. Waa waddankii ugu horreeyey ee Soomaaliya u soo gurmada, tanoo muujineysa wallaaltinimada dhabta ah.
Madaxweyne Museveni waa hoggaamiye Afrikaan ah oo muujiyey hoggaamin dhab ah, isla markaana ka dhabeeyey in wallaalaha Afrikaanka ay xalin karaan mushaakilaadka Afrika.” Madaxweynaha ayaa warbxin kooban sii yey wafdiga soo booqday oo uu yiri “Waxaa naga go’an inaan dadaalkii wallaalaha AMISOM u gudno, isla markaana aan dalka Soomaaliya ku soo dabaalno amni iyo kala danbeyn.
Waxaan hiigsaneynaa in 2016 aan doorashooyin xor ah qabano isla markaana aan caalamka kaalintii aan ku laheyn aan soo ceshano. Soomaaliya waxuu ahaan jirey dal qani ah isla markaana soo taageeray dalal badan oo Afrika ah oo ay ka mid tahay Ugandha.” Wafidga xildhibaanada dalka Ugandha ayaa iyagana uga mahadceliye Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamud kulanka, isla markaana gaarsiiyey fariin ay uga sideen baarlamaanka iyo Madaxweynaha Ugandha.
Sidoo kale waxey sheegeen inay Muqdisho ku arkeen horumar ballaaran iyo sida ciidamada Ugaandha ay rajo weyn uga qabaan in Soomaaliya ay cagaheeda isku taagto. Waxeyna sheegeen in Soomaaliya iyo Ugaandha ay yihiin wallaalo, isla markaana horumarka ballaaran oo ay arkeen ay warbixin ka siin doonaan Baarlamaanka iyo Dowladda Ugandha.
Shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Baydhabo